Ninh Binh, paradaịs na Vietnam | Akụkọ Njem
Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile bụ akwụkwọ ụzọ nke akwụkwọ ozi a na-agaghị echefu echefu, ma maka ala ahịhịa ndụ ya na akụ ọdịnala ya. VietnamNa mgbakwunye, ọ na-agbakwụnye akụkọ ihe na-atọ ụtọ na-adịbeghị anya. Anyị ekwuolarị banyere Hanoi, isi obodo ya, mana taa ọ bụ ntụgharị nke Ninh Binh, ebe mara mma.
Ninh Binh na-echebe ndị UNESCO Ma ebe ọ bụ na ọ bụ ihe na-erughị otu narị kilomita site na Hanoi, eziokwu bụ na ị gaghị echefu ya. Gaghị echefu ya echefu!
2 Ihe ime na Nanh Binh
Dị ka anyị kwuru, ọ gwụla Kilomita 90 site na Hanoi, n'ebe ugwu nke mba ahụ. Ọ bụ n'otu oge mpaghara na obodo mana obodo ahụ enweghị ihe ọ bụla iji gosipụta, akụ dị na gburugburu ebe njem njem n'èzí bụ ebumnuche.
Kedu ka ị ga-esi ruo Ninh Binh? N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 100 site na Hanoi, ọ bụ awa abụọ iji ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ịgbazite otu, mana ị nwekwara ike iru obodo Ninh Binh. site na ọgba tum tum, bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko. Gbọ oloko ahụ bụ nhọrọ dị mma ma enwere ọrụ isii na-ejikọ Hanoi na Ninh Binh kwa ụbọchị.
Ebe i nweela awa atọ nke njem mana a na-akwụ ụgwọ oge elekere na ụgwọ ahụ ebe tiketi na oche dị mma na-efu ihe dị ka dollar ise ọ bụla. Gbọ oloko ahụ dị ọcha, a na-erekwa nri n’elu ụlọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ bọs, enwere ọdụ abụọ na Hanoi, Giap Bat na My Binh, yana obere bọs na obere ụgbọ ala na-agba ọsọ kwa ụbọchị. Usesgbọ ala na-apụkarị mgbe ha jupụta na ụzọ ị ga-esi gaa ọdụ abụọ bụ site na ịnara Grab ma ọ bụ na tagzi. Naanị ihe fọdụrụnụ bụ ịsị na Giap Bat ọnụ mechiri n'etiti 5:30 na 6 n'ehihie. Naanị ị ga-agwa onye ọkwọ ụgbọ ala wee sị na ị rida na Ninh Binh.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ijide oge niile tagzi si Hanoi ruo Ninh Binh ma ọ dịghị ọnụ ala n’ihi na ọ ga-efu gị n’etiti dollar 60 na 100 otu ụzọ. Ma ọ bụ i nwere ike ịgbazite ọgba tum tum ma gaa n’ihu n’onwe gị iji uru ị nwere ike ime njem nleta na ụzọ ịkwụsị na Perfume Pagoda mara mma.
Ugbu a ziri ezi i no na hanoi ma mara mma Halong Bay? Echegbula onwe gị, enwere ụgbọ ala na-aga, ụlọ ọrụ GreenLian, na-efu $ 11 kwa onye ọ bụla na oge isii ruo awa asaa. Ọ bụrụ na ị nọ na sapa Nwekwara ike iji bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko laghachi Hanoi wee si n'ebe ahụ jikọọ Ninh Binh. Ha na-aga n’okporo ụzọ awara awara ma were awa anọ na isii.
Ugbu a ị nọ na Ninh Binh. Ogologo oge ole ka ị ga-anọ? Ọ kacha mma sitere ụbọchị abụọ, i nwere ike iji uru nke ihe okike na ihe ncheta ọdịbendị mee ihe.
Ihe ime na Nanh Binh
Akụkụ nke Vietnam a maara dị ka Halong Bay na ala na ọ bụ na… ọ mara mma! Trang An Ọ bụ mpaghara echekwara UNESCO ma ị nwere ike iji ọtụtụ awa gafere ọtụtụ awa. Pay na-akwụ ụgwọ mbata ma mgbe ahụ ị nwere ike iburu ụgbọ mmiri ma gaa na agwaetiti na agwaetiti nzu na n'akụkụ osimiri ị ga-ahụkwa ụlọ nsọ zoro ezo, ọmarịcha ugwu, ụlọ nsọ na-ese n'elu mmiri na ọgba. Foto ndị ị ga-ese! Kwee ka ije were awa abụọ.
Kpamkpam na Trang An ị nwere ike ịga na setịpụrụ ihe nkiri Kong, Skull Island, ebe a na-ese ihe nkiri ahụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nweghị mmasị na Vu Lam Obí na Dia Linh na Sinh Duoc Caves. Boatgbọ mmiri ọzọ bụ nke na-eme ka ị mara Tam Coc Bich Dong.
Ọ bụrụ na ị gaa n'oge owuwe ihe ubi osikapa, ọ bụ ezigbo akwụkwọ ozi na n'akụkụ abụọ nke osimiri n'ihi na ubi na-acha ọla edo ... Ozugbo ị nwere ike ịga leta usoro ọgba nke ọgba atọ, kwuru, otu n'ime ihe ndị mara mma na mba ahụ. N'elu ugwu ahụ enwere ụlọ nsọ, pagoda, site na narị afọ nke XNUMX. O yiri Trang An ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ, mana ọnụ ụzọ Buddhist mgbagwoju nke Bich Dong bụ n'efu, nwere pagodas atọ, ọkwa atọ na ihe karịrị otu narị steepụ.
Ihe dị mma bụ na ebe a ị nwere ike gbazite igwe kwụ otu ebe ma jiri aka gị na-agba ịnyịnya na ime obodo. Ma eleghị anya, ije gị ga-ewe gị ka ọtụtụ ndị mara Mua Cave. Iji rute ebe ahụ, ị ​​ga-ebu ụzọ kwụọ ụgwọ ego mbata wee rịgoro nzọụkwụ 500 gaa n'elu Ugwu nke Dragọn ahụ dina, yabụ karịa ọgba ọ bụ echiche dị mma nke Tam Coc.
Mgbe anyanwụ dara echiche ndị ahụ dị mma mana ịnweghị ike ịnọ ogologo oge n'ihi na abalị mechiri ma gbaa ọchịchịrị. Ndien ke akpatre, ị nwere ike ịga na Bai Dinh Pagoda nke dị ihe dịka afọ iri gara aga nke kachasị na Vietnam.
Firstbọchị mbụ nke njem a ga - eme ka ike gwụ gị ma ọ nweghị ihe ịsa ahụ na nri abalị Thai agaghị edochi. Ugbua n'ụbọchị nke abụọ nleta dị mkpa bụ Hoa Lu isi obodo ochie. O sitere na narị afọ nke iri ma ọ bụ nke iri na otu na ụlọ arụsị, obí eze, ebe nsọ na ebe nsọ. Ebibila ọtụtụ n'ime ha mana enwere ụlọ arụsị abụọ dị mkpa nke kwesịrị ịga leta: Tien Hoang na Ding Le Dai. Ọ bụ kilomita 14 site na Ninh Binh na kilomita ise site na Bai Dinh Pagoda.
Mgbe ahụ, enwere oku phat diem katidral, ọ bụrụ na ihe chọrọ ịmata ihe dọọrọ uche gị: ọ bụ a Templelọ Katọlik wuru dị ka onye Buddha Vietnam. Osisi na okwute nile. Ka m kwado gị obere oge: ozugbo ị gagharịchara ebe ndị a, enwere oge ịme ọzọ ụgbọ mmiri na ịbanye n'ime Van Long Nature Reserve, ala mmiri kachasị mma na mba nwere ụdị nnụnụ iri anọ na nnukwu ọgba mara mma a na-akpọ la Mermaid Cave nwere akpụrụ akpụ n’ime.
Ndụmọdụ ikpeazụ: ịgagharị Ninh Binh ọ kachasị mma ịgbazite ọgba tum tum na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na họtel. Gbakọọ n'etiti euro na asatọ euro. Nwere ike ịgbazite ọgba tum tum tinyere onye ọkwọ ụgbọala. Igwe kwụ otu ebe bụ nhọrọ ọzọ ebe ọ bụ na mbara ala ahụ dị larịị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Ninh Binh, paradaịs na Vietnam